‘နေရောင်ခံယူ ၊ အူကိုစောင့်ရှောက် ၊ အသက်ဉာဏ်စောင့်′ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ‘နေရောင်ခံယူ ၊ အူကိုစောင့်ရှောက် ၊ အသက်ဉာဏ်စောင့်′
‘နေရောင်ခံယူ ၊ အူကိုစောင့်ရှောက် ၊ အသက်ဉာဏ်စောင့်′
Posted by padonmar on Dec 21, 2014 in Creative Writing, Health & Fitness | 10 comments
ဓမ္မဗျူဟာ ၁၃-၁၂-၂၀၁၄ စနေနေ့
လူ၏ခန္ဓာကိုယ်တွင် ပြင်ပမှ မလိုအပ်သော အရာဝတ္ထုများ ကိုယ်တွင်းသို့ မဝင်နိုင်အောင် ခုခံကာကွယ်ပေးသော နေရာသုံးခုရှိပါသည်။ အရေပြား ၊ အဆုပ်နှင့် အူလမ်းကြောင်း(ပါးစပ်)တို့ဖြစ်ပါသည်။
ထိုဝင်ပေါက်သုံးခုထဲမှ မိမိဖာသာ တကိုယ်ရည် ထိန်းသိမ်းနိုင်သော အူလမ်းကြောင်းနှင့် အရေပြားကို စောင့်ရှောက်ခြင်းသည် အသက်ကိုဉာဏ်စောင့်သည်မည်ပါသည်။
အူသည် မိမိတို့စားလိုက်သော အစာကို ချေဖျက်ခြင်းနှင့် စုပ်ယူခြင်းအလုပ် ၂မျိုးလုပ်ပါသည်။
အူနံရံအမြှေးပါးများသည် ပြင်ပအရာဝတ္ထု (Foreign Body=F.B) များနှင့်ထိတွေ့ပါက ယောင်ရမ်းပြီး အပေါက်ကျယ်(Porex) များ ဖြစ်သွားတတ်ပါသည်။ ထိုအပေါက်ကျယ်များမှ ရောဂါပိုးနှင့် အဆိပ်ဓာတ်များ ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ ဝင်သွားခြင်းဖြင့် ကင်ဆာရောဂါ နှင့် ရောဂါပိုးမွှားများကြောင့် ဖြစ်သော Infection များ ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။ အူမကြီး တဝိုက်တွင်ရှိသော Lymph Node (ပြန်ရည်ကျိတ်) များက ထိုရောဂါပိုးနှင့် Foregin Body များကို ဖမ်းယူနှိမ်နင်း ပေးပါသည်။	အူလမ်းကြောင်းတလျှောက်တွင် သဘာဝအရှရှိနေသော အကျိုးပြုပိုးမွှားများ (Commensals) များကလည်း ခန္ဓာကိုယ်ခုခံအား၏ 80% ကို ထောက်ပံ့ပေးထားပါသည်။
အစာကိုကျေညက်စွာ ဝါးခြင်းမရှိဘဲ မျိုချပါက မညီညာသော မျက်နှာပြင် (Surface) ကြောင့် အူက F.B ဟုထင်ကာ ချေဖျက်ရန် ယောင်ရမ်းစေသော ဓာတ်များထုတ်လွှတ်တက်ပါသည်။ ထိုအခါ အဆစ်ရောင်(Arthritis) ၊ ကျီးပေါင်းတက် (Ankylosing Spondylitis) စသည့် Autoinmune Disease များဖြစ်တတ်ပါသည်။
*ဆောင်ရန် – အစာစားလျှင် ကျေညက်လွယ်တာစားပါ။ ညက်ညက်ဝါးပြီးမှ မျိုပါ။ အစာချေအင်ဇိုင်း (Digestive Enzyme) များကို ရံခါသောက်ပေးပါ။
အရေပြားသည် နေရောင်ခြည်တွင် ပါဝင်သော Vitamin D ကို အသည်းသို့ ဖြတ်စရာမလိုဘဲ ခန္ဓာကိုယ်မှ အသုံးပြု၍ ရအောင်လုပ်ပေးပါသည်။ Vitamin D သည် စင်စစ် Vitamin မဟုတ်ပါ။ Cholesterol မှထုတ်၍ရသော Hormone ဟော်မုန်း ဓာတ်တမျိုးသာ ဖြစ်ပါသည်။Vit D သည် အရိုးတွက်သာမက ကြွက်သားများကို ပြုပြင်ပေးခြင်း၊ ကင်ဆာရောဂါ ကာကွယ်ပေးခြင်း၊ ရောဂါပိုးမွှားများကို ခုခံပေးခြင်း တို့ကိုပါ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။Vit D ကို နေရောင်ခြည်အပြင် ငါးဗိုက်သား၊မှို စသည့်အစားအသောက်များမှ ရနိုင်သော်လည်း ပမာဏ အလွန်နည်းပါသည်။ Vit D ချို့တဲ့လျှင် (Hypothyroid ) Thyroid Hormone ချို့တဲ့သောကြောင့် အရေပြား ရောဂါ ၊ စိတ်ကျရောဂါ အပါအဝင် နောက်ဆက်တွဲရောဂါအများအပြား ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ယခင်ဟောပြောပွဲများတွင် ရှင်းပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ဤမျှအရေးကြီးသော Vit D ကို မြန်မာပြည်တွင် နေရောင်ခြည်မှ ပေါပေါများများ ရနိုင်ပါသည်။ သို့သော် အိမ်တွင်းတွင်သာ နေကြခြင်း ၊ အပြင်ထွက်လျှင်လည်း အင်္ကျီ လက်ရှည် ၊ လုံချည်များ ဖုံးအုပ်နေသောကြောင့် နေရောင်ခြည်ပေါများသော မြန်မာပြည်တွင်လည်း Vit D ချို့တဲ့သောရောဂါ ကိုတွေ့နေရပါသည်။
*ဆောင်ရန် – (၁) နံနက် ၁၀နာရီမတိုင်မီ နေရောင်ခြည်အောက်တွင် (မျက်နှာကို ဖုံးကွယ်၍) လက်နှင့်ခြေတို့ကို ၁၅ မိနစ်ခန့် နေပူစာလှုံ ပေးပါ။ တပတ်လျှင် ၃ ကြိမ် အနည်းဆုံးလုပ်ပေးပါ။
(မှတ်ချက်။ ။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ထုတ်လွှင့်မှု များနေသော နေ့လည် ၊မွန်းလွဲချိန်များတွင် နေရောင်အောက် အကာအကွယ် မပါပဲ မသွားသင့်ပါ)
(၂) Vit D3 ကိုဖြည့်စွက်သောက်ပါ။ စမသောက်မီ Baseline သိအောင် (သွေးထဲမှ 25 Hydroxy Vit D3 Level ကို) သွေးဖောက်စစ်ပါ။ Vit D3 High Dose သောက်ပြီး ၂လခန့်ကြာလျှင် သွေးပြန်ဖောက်စစ်ကြည့်ပါ။ အနည်းဆုံး 40-60 ng/ml ရှိသင့်ပါသည်။ အကောင်းဆုံးမှာ 90-100 ng/ml ဖြစ်ပါသည်။ သွေးထဲတွင် 30 ng/ml အောက်သာရှိပါက ကင်ဆာရောဂါ နှင့် Bacteria, Virus Infection များဖြစ်နိုင်ပါသည်။
Vit D 100 IU နေ့စဉ်သောက်လျှင် (အူမှစုပ်ယူအားကောင်းပါက) Vit D3 1 ng/ml တက်လာပါမည်။
တနေ့လျှင် 5000 IU နေ့စဉ်သောက်နိုင်သည်။ ရောဂါရှိလျှင် Vit D 20000 IU ကို ၈ ပတ်သောက်ပြီး သွေးပြန်စစ်ကြည့်ပါ။
Vit D2 ကို ထိုးဆေးအနေဖြင့် ထိုး၍လည်း ရပါသည်။
(၃) Vit K ကိုလည်း ဖြည့်စွက်သောက်သင့်ပါသည်။ Vit K တွင် K1 နှင့် K2 ဟူ၍ နှစ်မျိုး ရှိပါသည်။
Vit K1 သည် အရွက်စိမ်းများမှ သဘာဝအတိုင်းရပြီး သွေးတိတ်အောင် လုပ်ပေးသောဓာတ်ဖြစ်ပါသည်။
Vit K2 သည် သွေးထဲမှ ကယ်လဆီယမ် Ca+ ကို အရိုးထဲရောက်အောင် ပို့ပေးပါသည်။ အရိုးပွရောဂါရှိလျှင် Vit K2 သောက်ရပါမည်။
MK4 1000 mg + MK7 100 mg တွဲထားသောဆေး သောက်သင့်ပါသည်။ အချို့ဆေးများမှာ Vit D 5000 IU+ MK4 1000 mg + MK7 100 mg ရောထားပြီးသားလည်း လာတတ်ပါသည်။
(၁) ကင်ဆာဆဲလ်ကို အားပေးသော သကြား ၊ အချို ရှောင်ပါ။
(၂) အချိုမှုန့် ၊ ငံပြာရည် ၊ ငါးပိ ရှောင်ပါ။
(၃) အူကျန်းမာအောင် နေပါ။ အပြင်စာများ မစားပါနဲ့။
Probiotics 20 Billion သောက်ပါ။
– Magnesium Ascorbate (Vit C)1000-2000 mg
-Mixed Tocopherol (Vit E) 800 IU
-Selenium 200 mcg
– Co Q10 100 mg (ကာကွယ်ရန်)-200 mg( ရောဂါတခုခု ရှိနေလျှင်)
– Magnesium 600 mg တို့ကို နေ့စဉ်သောက်ပါ။
အရင်က ရေးထားတာတွေနဲ့ မတူတာလေးတွေပဲ ရေးတော့ နားမရှင်းကြရင် မမဒေါ်ခင်နွယ်ဝင်း FB က ရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့ တွဲဖတ်ကြပါ။ရှည်မှာစိုးလို့ ခွဲတင်ပြီးမှ တနေ့ထဲ ၂ပုဒ်ပြည့်သွားလို့ နောက်နေ့တွက် schedule လုပ်ထားလိုက်ရပါတယ်။ အပေါ်ပို့စ်ဖတ်ပြီး မရှင်းတဲ့လူတွေတွက် ကွန်မန့်အဖြစ် ကူးပေးလိုက်ပါတယ်။
Dr.ဒေါ်ခင်နွယ်ဝင်း၏ Facebook ပေါ်မှ ရှင်းလင်းဟောပြောချက်များ
တေ ဇော ဓာတ် နှင့် hormone များ ဆက် စပ် နေ ပုံ
ခေတ် မီဆေးပညာရှင်တွေက ပြောပါတယ်၊ ခန္ဓာကိုယ် ကြီး ရဲ့ system အား လုံး မျှတနေမယ် ဆို ရင် ရော ဂါ တွေ မ ဖြစ် ကြပါဘူးတဲ့။ တစ်ခုခု ချွတ်ယွင်းသွား ပြီ ဆို ရင် တနေရာရာ က ရော ဂါ တစ်ခုခုအ နေ နဲ့ ပေါ်လာတော့တာဘဲ။ အဲ ဒီတော့ ပေါ်လာတဲ့ ရော ဂါ မျိုး စုံ ကို ဘေး ထွက် ဆိုး ကျိုး တွေ အ လွန် များ တဲ့ ဆေး မျိုး စုံ နဲ့ကုမယ့် အ စား ခန္ဓာကိုယ် ကြီးမှာ လို အပ် နေ တဲ့ ဓာတ် တွေကို ပြန် ဖြည့် ပေး လိုက် မယ် ဆို ရင် ဖြစ် နေ တဲ့ ရော ဂါ တွေ တ ဖြည်း ဖြည်း ပျောက် သွား မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
နောက် ဆုံး မှာ တော့ ဓာတ် ကြီး ၄ ပါး ပါ ဘဲ။ မျှ တ နေ ရင် ရော ဂါ မ ဖြစ် ပါ ဘူး။ ဓာတ် ကြီး ၄ ပါး လုံး ဟာ အကုန် သူ့ အ လုပ် နဲ့ သူ အ ရေး ကြီး ပေ မဲ့ တေ ဇော ဓာတ် က တော့ ခန္ဓာ ကိုယ် ကြီး အ လုပ် ကောင်း ကောင်း လုပ် ဘို့ အ ခ ရာ ပါ ဘဲ။ အင်္ဂ လိပ် လို ပြော ရ ရင် ခန္ဓာ ကိုယ် ကြီး အ တွက် Master Conductor ပေါ့။ ဒီ တေ ဇော ဓာတ် လောင် ကျွမ်း စေ ဘို့ မှာ hormone ဓာတ် တွေ က ဘယ် လောက် အ ရေး ကြီး လဲ ဆို တာ နောက် ဆက် တွဲ အ နေ နဲ့အ ခွင့် သာ တဲ့ အ ခါ၊ တင် ပြ သွား ပါ့ မယ်။
မြန် မာ လို ဖတ် ချင် သော မိတ် ဆွေ များ အ တွက် Vitamin D3အ ကြောင်း သိ ကောင်း စ ရာ ဗ ဟု သုတ
ယ ခု အ ခါ မြန် မာ ပြည် ၌ ရော ဂါ မျိုး စုံ ထူ ပြော ပြီး ကျန်းမာ ရေး မ ကောင်း ကြ ပါ။ အ ကြောင်း မျိုး စုံ ကြောင့် ဖြစ် ပြီး အ ရေး ကြီး တဲ့ အ ကြောင်း တစ် ခု အ ကြောင်း တင် ပြ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
Vitamin D3 ကို လူ တော်တော်များများ ထင် နေ တာ က အ ရိုး တွေ ခိုင် ခံ့ ကျန်းမာအောင် လို့ ဘဲ ထင် နေ ကြ ပါ တယ်။ ဒီ vitaminဓာတ် ရဲ့ အ လွန်အ ရေး ကြီး တဲ့ အ ချက် ကို လူ တွေ သိပ် မ သိ ကြပါ ဘူး။ သူ က ခန္ဓာ ကိုယ် ခု ခံ အား ကောင်း ဘို့  အ တွက် အ လွန် အ ရေး ကြီး ပါ တယ်။အ ရေ ပြား ကို နေ ရောင် ခြည် ထိ တဲ့ အ ခါ cholesterol က နေ ပြီး vitamin D3 ကို ထုတ် လုပ် လိုက် ပါ တယ်။ ထုတ် ပြီး ပြီး ချင်း ခန္ဓာ ကိုယ် ထဲ မှာ အ လုပ် မ လုပ် နိုင် သေး ပါ ဘူး။ အ သဲ နဲ့ ကျောက် ကပ် မှာ အ လုပ် လုပ် နိုင် တဲ့ vitamin D3 ကို ပြောင်း ရ ပါ တယ်။
မြန် မာ ပြည် မှာ နေ ရောင် ခြည် လုံ လောက် စွာ ရ ပေ မဲ့ လို့ မြန် မာ ပြည် ရဲ့ ဝတ် စား ဆင် ယင် မှု ကြောင့် တ ကြောင်း၊ အ သဲ ရောဂါ နှင့် ကျောက်ကပ်ရောဂါ ထူ ပြောခြင်း တို့ကြောင့် တကြောင်း vitaminDဓာတ် ကို လုံလုံလောက်လောက် မ ရ ကြပါ။ မိန်းမ ယောင်္ကျား အားလုံး ထဘီ လုံချည် နဲ့ အောက် ပိုင်း ကို အ ကုန် ဖုံး ထား ကြပါ တယ်။ အင်္ကျီကျ တော့ လဲ များ သော အား ဖြင့် လက် ရှည် ဘဲ ဝတ် ကြ တာ ဆို တော့ အ ပေါ် ပိုင်း လည်း နေ မ ထိ ပါ။
အ သဲ နဲ့ ကျောက် ကပ် ရော ဂါ သည် တွေ က လဲ များ တော့ vitamin D3ရှိ ပေ မဲ့ အ လုပ် လုပ် နိုင် တဲ့ ဓာတ် ကို ပြောင်းဖို့ အား နည်း နေ ကြ ပါ တယ်။ပို ဆိုး စေ တဲ့ အ ချက် က တော့ လူ တော် တော် များ များ ကလည်း hypothyroid ဖြစ် နေ ကြ တော့ ခု ခံ အား သိပ် ကို နည်း နေကြတာ နဲ့ အ မျှ ရောဂါမျိုးစုံဝင်တာ ခံ ကြရပါတယ်။အ သဲ ရော ဂါ ၊TB၊ B ပိုး၊ C ပိုး ၊ ကင် ဆာ စ သည် ဖြင့် ပေါ့။
အကြောင်း ရင်း တစ် ခု ကို သိ ရှိ နား လည် သွား ပြီ ဆို ရင် “ ပြင် လိုက် ရင် သစ် သွား မှာ ပါ”
– အ ရှင် ဆန္ဒာ ဓိက
ဘယ်ဆီကို ဘယ်လို စားသင့်သလဲ
မြေ ပဲ ဆီ၊ ပြောင်း ဖူး ဆီ၊ Canola oil ,Sunflower oil, Soybean oil ,Vegetable oil များ ထုတ် လုပ် ရာ ၌ အ စေ့ များ ကို အ ပူ ရှိန် အ မြင့် မှာ အ ပူ ပေး ပြီး အ ဆီ ကို ညှစ် ထုတ် ရ ပါ တယ်။ Polyunsaturated oils – room temperature မှာ မ ခဲ ဘဲ liquid ဖြစ် နေ ပါ တယ်။ထို နောက် ဓာ တု ဗေ ဒ ဆေး မျိုး စုံ ကို သုံး ပြီး စား သုံး သူ ဝယ် ချင် အောင် အ ပြီး သတ် ရ ပါ တယ်။ ဒီ ဆီ တွေ ဟာ ဆီ ချေး တက် လွယ် ပြီး (rancid )ခန္ဓာ ကိုယ် တွင်း ယောင် ကိုင်း စေ ပါ တယ်။
ဒီ ဆီ တွေ ကို ဓာ တု ဗေ ဒ နည်း နဲ့ ပြောင်း ထား တော့ unstable ဖြစ် လွယ် ပြီးး လူ ကို ဥ ပါဒ် ပေး မဲ့ oxygen free radicals တွေ အ များ ကြီး ရှိ ပါ တယ်။ ပို ဆိုး တာ က ဒီ ဆီ တွေ ကို ဓာ တု ဗေ ဒ နည်း နဲ့ ပြန် ခဲ အောင် လုပ် ပြီး margarine , crisco oil အ နေ နဲ့ ရောင်း တာ ဟာ ဥ ပါဒ် အ လွန် များ ပြီး နှလုံး ရော ဂါ ၊ ကင် ဆာ၊ ဆီး ချို၊ သွေး တိုး စ သည် ဖြင့် ရော ဂါ မျိုး စုံ ဝင် နိုင် ပါ တယ်။
– ဘာ မ ဆို အိမ် လုပ် တွေ ဘဲ စား သုံး ကြပါ။ လော ဘ ဦး ဆောင် နေ တဲ့ ကုမ္ဗဏီ ကြီး တွေ က ရောင်းတာ တွေ ရှောင် ရင်၊ သက် ရှည် ကျန်းမာ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။ ကျွန် မ တို့ ရဲ့ ခေတ် ကြီး က လုံး ဝ ပြောင်း လဲ သွား ပါ ပြီ။ ရော ဂါ ထူ ပြော ပြီး အ သက် တို ကြမယ့် ကာ လ ရောက် လာ ပြီ ထင် ပါ ရဲ့။ သ တိ နဲ့ နေ ပြီး ဥာဏ် ကို သုံး မယ် ဆို ရင် ခံ သာ ပါ လိမ့် မယ်။Olive oil ,coconut oil စား ကြ ပေါ့။ မီး ပြင်း ပြင်း နဲ့ ချက် ရင် အုန်း ဆီ သုံး ပြီး၊ salad အသုပ်စား ရင် သံ လွင် ဆီ သုံး ပါ။
ဇီ ဝိ တိနြေ္ဒ နှင့် ခေတ် မီဆေး ပ ညာ အ ယူ အ ဆ
ဆေး ပ ညာ (Functional medicine – ခန္ဓာ ကိုယ် မှာ ရှိ တဲ့ system အား လုံး ဟာ မျှ တ နေ တာ = ကျန်း မာ ခြင်း ) က ထွက် ဆို တာ က၊ လူ တစ် ယောက် ရဲ့ ကျန်း မာ ရေး ဟာ အ စာ အိမ် အောက် မှာ ရှိ တဲ့အူ ရဲ့ ကျန်း မာ ခြင်း ပေါ် မူ တည် ပါ တယ် တဲ့။ အူ တွင်း မ ကျန်း မာ တဲ့ သူ ဟာ ရော ဂါ မျိုး စုံ ဝင် ပြီး ကျန်း မာ ရေး မ ကောင်း ပါ ဘူး တဲ့။
ဋီ ကာ ကျော် ဖတ် ရင်း နဲ့ ဘာ သွား တွေ့ သ လဲ ဆို တော့ မိ မိ နှင့် တကွဖြစ်ဖက် ကမ္မဇရုပ်တွေ ရှင် သန် နေ အောင် စောင့် ရှောက် သော ကမ္မဇရုပ်များ ၏ အ သက် သည် ဇီ ဝိ တ ရုပ် ဖြစ် ပါ တယ်။ စောင့် ရှောက် ခြင်း မှာ အ စိုး ရ လို့ ဇီ ဝိ တိနြေ္ဒ လို့ ခေါ် ပါ တယ်။
စိတ် ဝင် စား စ ရာ ကောင်း တာ က တော့ ဇီ ဝိ တိနြေ္ဒ ဟာ( ဥ ပါ ဒိန္န ကာ ယ )တ ကိုယ် လုံး မှာ ရှိ တဲ့ အ ပြင် အ စာ အိမ် အောက် နေ ရာ ဖြစ် တဲ့ ဝမ်း မီး မှာ လဲ ရှိ တယ် ဆို တာ ပါ ဘဲ။ ဆေး ပ ညာ သ ဘော နဲ့ ကြည့် မယ် ဆို ရင် လူ့အ သက် စောင့် ဟာ အူ ထဲ မှာ လဲ ရှိ တယ် ပေါ့။
အဲ ဒီ တော့ အူ ကျန်း မာ ရေး ဟာ ဘယ် လောက် အ ရေး ကြီး တယ် ဆို တာ ထင် ရှား နေ ပါ ပြီ။
အူ ကျန်း မာ ချင် ရင် လမ်း ဘေး စာ တွေ ရှောင်၊ gluten ၊ နွား နို့ ရှောင်၊ ဟင်း ရွက် တွေ ကြိတ် သောက်၊ probiotics တွေ သောက် ပြီး ကောင်း တဲ့ ပိုး တွေ အူ ထဲ မှာ မွေး လိုက် မယ် ဆို ရင် ခု ခံ အား တွေ လဲ ကောင်း ပြီး ဇီ ဝိ တိနြေ္ဒ က စောင့် ရှောက် အား တွေ များ ပြီ ပေါ့။
ကင် ဆာ နှင့် သ ကြား ဓာတ်
ကင် ဆာ ဟာ သ ကြား ကို အင် မ တန် ကြိုက် တယ် ဆို တာ သိ ခဲ့ တာ နှစ် ပေါင်း တစ် ရာ ရှိ ခဲ့ ပါ ပြီိ။ သို့ ပါ သော် လည်း လူ နာ အ လေး ချိန် တက် ရင် ပြီး ရော ဆို ပြီး ကင် ဆာ ဆ ရာ ၀န် တွေ က အ စ လူ နာ စား ချင် တာ အ ထူး သ ဖြင့် အ ချို တွေ ကြွေး တာ စိတ် ပူ စ ရာ ပါ။
သ ကြား ဓာတ် များ ရင် insulin ဓာတ် တက် မယ်၊ insulin ဓာတ် တက် ရင် အ ဆီ က လာပ် စည်း တွေ ပွား ရုံ မ က ကင် ဆာ က လာပ် စည်း တွေ လည်း ပွား ပါ တယ်။ Insulin AMPK ( Kinase pathway ) နဲ့ ပါ။ Insulin makes cells grow including cancer cells.
ကိုယ် ဖမ်း ချင် တဲ့ အ ရာ ကို သူ တို့ကြိုက် တာ နဲ့ မျှား ပြီး ဖမ်း ကြ တယ် မ ဟုတ် လား။ ဥပ မာ ငါး ဖမ်း ချင် ရင် တီ ကောင် ကို သုံး သ လို ဘဲ ပေါ့။ ဒီ အ တိုင်း ပါ ဘဲ ကင် ဆာ ဘယ် နေ ရာ မှာ ရှိ လဲ ဆို တာ သိ ချင် ရင် လူ နာ ထဲ ကို သ ကြား ( radio isotope tagged sugar ) ထိုး ပြီး ကင် ဆာ ရှာ တဲ့ Pet Scan ကို တွင် တွင် ကြီး သုံး နေြ က တဲံ့အ ထောက် အ ထား ကို သာ ထောက် ရှု ပြီး ကြည့် ကြ ပါ တော့။
အ များ ကောင်း ကျိုး မို့ အ တွေး အ ခေါ် အ ယူ အ ဆ တွေ ပြန် လည် ဆန်း သစ် စေ ချင် ပါ တယ်။ အ တွေး အ ခေါ် ဟောင်း တွေ နဲ့ အ တိတ် မှာ မ ကျန် ရစ် ပါ စေ နဲ့။
ဟော ပြော ပွဲ တုန်း က အ လွန် အ ရေး ကြီး တဲ့ အ ချက် တစ် ခု ပြော ပြ ဘို့ မေ့ ကျန် ရစ် လို့ ဒီ က နေ ဘဲ ပြော ပြ ပါ တော့ မယ်။
မိ သား စု အ လိုက် ဆီး ချို ရော ဂါ ဖြစ် နေ တဲ့ သူ ရဲ့ က လေး တွေ က genetic predisposition for diabetes လဲ ရှိ နိုင် တာ မို့ မှတ် ရန် အ ချက် က လေး တစ် ခု တင် ပြ ချင် ပါ တယ်။
Early diabetes ကို စ တင် ဖြစ် စေ တဲ့ အ ကြောင်း ( ဆီး ချို ခ လုပ် ကို ပွင့် အောင် ဖွင့် တဲ့ ) ဟာ –
၁. နွား နို့
၂. သ ကြား
၃.အ ချို မှန့် တို့ ဖြစ် ပါ တယ်။
က လေး တွေ ( ၁ နှစ် မှ ၁၂ နှစ် ) အ ရွယ် မှာ Vitamin D3 1000IU -2000IU တိုက် ရင် Type 1 diabetes မှ ကာ ကွယ် ပေး နိုင် ပါ တယ် တဲ့။ဒီ အ ချက် အ လက် ဟာ Vitamin D အကြာင်းသုတေသနလုပ်ပြီး ( PhD )ရ ထား တဲ့ နာ မည် ကျော် ဆ ရာ ၀န် ကြီး ရဲ့ တင် ပြ ချက် ဖြစ် ပါ တယ်။
ခင် နွယ် ၀င်း ရဲ့ အာ ဘော် မ ဟုတ် ပါ။
အာတီဒုံဂျီးကို ဖေ့ဘွတ်မှာ အတွေ့ဒေ့ါတာ ဘာကြောင့်ရဲ…။
ကျေးဇူးပါ ။ ဒေါက်တာ ပဒုမ္မာရေ။။
ကင်ဆာဆဲလ်ကို အားပေးသော သကြား ၊ အချို ရှောင်ပါတဲ့….
ရွာထဲက သဂျားကိုတော့ ရှောင်လို့မြဝူးးးးး
မျိုးရိုးကြောင့် ဆီးချိုဖြစ်တာ မဟုတ်ပေမယ့်….သမီးအသက် ၁၈ နှစ်လောက်မှာ မိခင်က ဆီးချိုရောဂါရှိနေရင်ရော…သားသမီးအနေနဲ့ ဆီးချိုဖြစ်နိုင်ခြေများလား အာတီဒုံ….။ ပြီးတော့ ဘာတွေများ ဆင်ခြင်သင့်သလဲ၊ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ကြိုတင်ကာကွယ်သင့်လဲ သိပါရစေ…။
၁ ကနေ ၅ ထိ တခုမှကို မလုပ်ဖြစ်ဘူးဗျာ… ဒုက္ခပဲ… တခြားနည်း ရှိသေးရင် ပြောပြပေးပါဦးဗျာ…
အလကားရတဲ့​နေ​ရောင်​ခြည်​​တောင်​မခံရတဲ့ဘ၀ပါ။ တစ်​ပတ်​တစ်​ရက်​​တော့ရ​အောင်​ပြန်​လုပ်​ရမယ်​။ ​နေ့ခင်းထမင်းစားချိန်​ပဲ အချိန်​ရတယ်​။ အဲ့အချိန်​​နေကလည်းအရမ်းပူလို့မျက်​လုံး​တောင်​ဖွင့်​မရချင်​ဘူး။ ရုံးထဲက​နေအပြင်​ထွက်​လိုက်​ရင်​ ​သွေးစုပ်​ဖုတ်​​ကောင်​လိုပဲ မျက်​လုံကအလင်း​ရောင်​ကိုမခံနိုင်​ဘူးဖြစ်​​နေတယ်​။